Nankatoavin’ny UNESCO Ho Vakoka Ara-kolontsaina Ilay Andron’ny Renibe Volana Martsa, Fomba Amam-panao Iray Ao Balkana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2017 15:24 GMT
Ny fanaingoana mandritra ny Andron'ny Renibe Volana Martsa antsoina hoe martinki/mártenitsa/mărţişor/martis/verore. Sary avy amin'ny HAEMUS, nahazoana alàlana.
Nanome ny satan'ny “vakoka ara-kolontsaina” ho an'ny fomba amam-panao manokana mifandraika amin'ny Andron'ny Renibe Volana Martsa ao Balkana ny UNESCO. Natao hankalazana ny fahatongavan'ny lohataona any Atsimo Atsinanan'i Eoropa ilay andro . Manasongadina ny fifanakalozana sy ny fanaovana ny fehin-tànana mena sy fotsy vita amin'ny volon'ondry ary ny haingon'akanjo (broche) ity fomban-drazana ity.
Nanamafy ity fomba amam-panao ara-kolontsaina ity ny fivoriana faha roambinifolon'ny Komity Iraisan'ny Governemanta ho Fiarovana Ny Vakoka Ara-kolontsaina volana Desambra 2017 tany Korea Atsimo. Nangataka ny sata avokoa i Makedonia, i Boligaria, i Romania ary i Moldavia tamin'ny fangatahana taona 2013.
Ahitana fomban-drazana nampitaina nanomboka hatramin'ny fahagola mba hankalazana ny fiandohan'ny lohataona ity Fomba Amam-panao Ara-kolontsaina izay Atao Ny Voalohany Volana Martsa ity. Ahitana ny fanamboarana, ny fanolorana sy ny fanaovana fehin-tanana mena sy fotsy izy ity ary vahana izany rehefa miseho ny famonin'ny hazo, ny voronkely na ny cigogne… Heverina fa manome ny mariky ny fiarovana amin'ny loza toy ny toetr'andro mahery ity fehin-tanana namboarina ity, miaraka amin'ny fomba fanao izay miantoka ny fizotran'ny ririnina mankany amin'ny lohataona mba hizotra soa aman-tsara ho an'ny tsirairay, ny vondrona ary ny vondrom-piarahamonina. Mandray anjara avokoa araka ny sokajin-taona misy azy avy ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondrom-piarahamonina izay voakasik'izany ary manampy amin'ny firindran'ny fiarahamonina, ny fifanakalozana isan-taranaka ary ny fifandraisana amin'ny natiora, izay manamafy ny fahasamihafana sy ny fahaiza-moronana ilay fombafomba.
Ny fampianarana antsisin-dalana no matetika fomba ampiasaina mba ifandraisana : any amin'ny faritra ambanivohitra, ny vehivavy lehibe no mampianatra ny tovovavy ny fomba hanamboarana ilay fehin-tanana, ​​raha any amin'ny faritra an-drenivohitra kosa dia ny mpampianatra, ny mpanao asatanana ary amin'ny alàlan'ny fampianarana tsy ofisialy no hianarana izany.
Ny fehin-tànana vita amin'ny volon'ondry ho an'ny Andron'ny Renibe Volana Martsa antsoina hoe martinka/mártenitsa/mărţişor/martis/verore. Sary avy amin'ny HAEMUS, nahazoana alàlana.
Atao toy ny haingon-tanana na apaingotra amin'ny akanjo ity karazana firavaka-sampy namboarina tanana ity, ary ahantona eny ambony hazo avy eo. Antsoina hoe martinki (мартинки amin'ny Makedoniana), mártenitsa (мартеница amin'ny Boligariana), mărţişor (amin'ny Romaniana), martis (μάρτης amin'ny Grika) ary verore (amin'ny Albaniana) izany. Mitondra izany ireo foko Albaniana rehefa tonga ny faha 14 -n'ny volana Martsa izay anisan'ny Fetiben'ny Fahavaratra .
Manasongadina ilay mpikatroky ny vakoka ara-kolontsaina Vasilka Dimitrovska izay nanoratra momba ny fomba amam-panao amin'ny Andron'ny Renibe Volana Martsa tamin'ny taona 2016 ity lahatsary manaraka navoakan'ny UNESCO ity.
Nankalaza ny vaovao ireo mpiseran'ny media sosialy avy amin'ireo firenena miisa efatra.
Arahabaina, araka ny hita androany tao Korea , neken'ny UNESCO ny fampidirana ny vakoka ara-kolotsain'ny fomba amam-panao itovizan'ny firenena maromaro.
Fanomezana mahafinaritra tsy nampoizina tao amin'ny #StNicholasDay#Mărțișor, nampidirina tao anaty lisitry ny vakoka ara-kolontsain'ny UNESCO.
Ny mariky ny lohataona – voarakitra ao anaty Lisitry ny Vakoka Ara-kolontsain'ny Olombelona an'ny UNESCO ireo kofehy mena sy fotsy mirandrana izay hanaovantsika isaky ny volana Martsa. Mampiavaka manokana an'i Boligaria, Romania, Makedonia ary Moldavia.
Nandrakitra ny fomba amam-panao ao Balkans iray hafa tao amin'ny Lisitry ny Vakoka Ara-kolontsain'ny Olombelona antsoina hoe Hıdrellez, Fankalazana ny Lohataona, izay atao any Makedonia sy Torkia ny UNESCO ankoatra ny Fomba Amam-panao Ara-kolontsaina Mifandraika Amin'ny 1 Martsa, .